खानेपानीमा कोलिफर्म भेटिएका विद्यालयमा कोलाइडल सिल्भर फिल्टर वितरण – WASHKhabar
खानेपानीमा कोलिफर्म भेटिएका विद्यालयमा कोलाइडल सिल्भर फिल्टर वितरण
६ असार २०७६, शुक्रबार १३:२७ 1330 पटक हेरिएको
सिन्धुपाल्चोक : सुरक्षित पानी उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सिन्धुपाल्चोकका ११ विद्यालयमा ७५ वटा कोलाइडल सिल्भर (चाँदी लेपन गरिएको क्याण्डल सहितको) फिल्टर उपलब्ध गराइएको छ । खानेपानी योजना निर्माणका बेला गरिएको पानीको गुणस्तर परीक्षणमा कोलिफर्म (दिसाको किटाणु) देखिएका विद्यालयमा कारितास स्वीटजरल्याण्ड र हेल्भेटास नेपालले कोलाइडल सिल्भर फिल्टर उपलब्ध गराउन थालेका हुन् ।
स्थानीय साझेदार संस्था सामुदायिक विकास तथा वातावरण संरक्षण मञ्चसँगको सहकार्यमा मेलम्ची नगरपालिका र हेलम्बु गाउँपालिकाका ११ विद्यालयमा ७५ वटा कोलाइडल सिल्भर फिल्टर वितरण गरिएको छ ।
‘हेलम्बु आधारभुत विद्यालयमा ६ वटा, गोल्मादेवी माध्यामिक विद्यालयमा १२ वटा, महेन्द्र माध्यामिक विद्यालयमा १५ वटा, ज्योती भञ्ज्याङ आधारभुत विद्यालयमा २ वटा, सूर्योदय आधारभुत विद्यालयमा ३ वटा, महाकाली निन्देश्वरी आधारभुत विद्यालयमा ६ वटा, जय बागेश्वरी माध्यमिक विद्यालयमा १२, जागेश्वरी आधारभुत विद्यालयमा ५, भञ्ज्याङ आधारभुत विद्यालयमा ५, सिद्धार्थ आधारभुत विद्यालयमा ६, कोलेचौर आधारभुत विद्यालयमा ४ वटा वितरण गरिएको छ ।’
मञ्चका कार्यक्रम अधिकृत विनोद शर्माले भन्नुभयो, ‘खानेपानी योजना निर्माणका क्रममा गरिएको गुणस्तर परीक्षणमा कोलिफर्म देखिएको विद्यालयमा दुई वटा कोलाइडल सिल्भर क्याण्डलसहित स्टिलको भाँडो भएको फिल्टर वितरण गरिएको छ । सबै विद्यालयमा १८ देखि २१ लिटर क्षमताको फिल्टर र फिल्टर राख्ने फलामको स्ट्याण्ड समेत उपलब्ध गराइएको छ ।’ विद्यार्थी र शिक्षक सँख्याको आधारमा फिल्टर उपलब्ध गराइएको र विद्यार्थी तथा शिक्षक सहितलाई फिल्टर जडान र प्रयोगका बारेमा अभिमुखिकरण समेत गराइएको मञ्चले जनाएको छ ।
सिन्धुपाल्चोकका भूकम्प प्रभावित विद्यालयको पुननिर्माण परियोजना अन्तर्गत थप केहि विद्यालयमा पनि कोलाइडल सिल्भर फिल्टर सहयोग गरीने मञ्चले जनाएको छ । पानीजन्य रोगबाट बिद्यार्थी तथा शिक्षकलाई बचाउन र सुरक्षित पानीका बारेमा विद्यार्थी मार्फत अभिभावक र समुदायसम्म सचेतना फैलाउने उद्धेश्यसहित कोलाइडल सिल्भर फिल्टर वितरण गरिएको अधिकृत शर्माको भनाई छ ।
‘विद्यालयमा उपलब्ध गराइएको फिल्टरमा दुईवटा पानी छान्ने क्याण्डल छन् । एउटा क्याण्डलले प्रति घण्टा दुई लिटरका दरले पानी छान्छ । क्याण्डल माटोबाट बनेको हुँदा संवेदनशील भएकोले प्रयोग गर्दा ध्यान दिनुपर्छ । मेलम्चीमा एउटा क्याण्डलको दुई सय पचास रुपैंयाँ हाराहारी पर्छ । तर सफा नभइ सुरक्षित पानी उपलब्ध गराउनका लागि केहि महँगो भए पनि कोलाइडल सिल्भरलाई प्रवद्र्धन गरेका हौं ।’
उहाँले भन्नुभयो, ‘कोलाइडल सिल्भरले सूक्ष्म जीवाणुहरुको कोषमा हुने रासायनिक प्रक्रिया दरलाई परिवर्तन गरी अक्सिजन प्रयोग गर्ने क्षमतामा ह्रास ल्याउँछ । यसले गर्दा यी जीवहरु अक्सिजनको अभावमा निस्सासिएर मर्छन् ।’
के हो कोलाइडल सिल्भर फिल्टर ?
क्याण्डल फिल्टर धेरै वर्ष अघिदेखि प्रचलनमा रहेको पानी सफा गर्ने प्रविधि हो । यस्तो फिल्टरमा दुई खण्ड हुन्छन् । माथिल्लो खण्डमा एक वा दुईवटा पानी छान्ने क्याण्डलहरु हुन्छन्, जसमा स–साना प्वालहरु हुन्छन् । पानीमा भएका ठोस पदार्थ र केही कीटाणुहरु यसबाट छिर्न सक्दैनन् ।
फिल्टरको भाँडो साधारणतयाः आलुमिनियम, स्टिल, माटो वा तामाको बनाइएको हुन्छ भने क्याण्डल साधारणतयाः माटोबाट बनेको हुन्छ । यस्तो फिल्टरले पानीमा भएको धमिलोपना र केही मात्रामा जीवाणुहरु हटाउँछ । यो प्रयोग गर्न सजिलो छ तर जीवाणुहरु पूर्ण रुपमा नहट्न सक्छ ।
यही कुरालाई ध्यानमा राखेर खानेपानीमा भएका सबै जीवाणुहरु नष्ट गर्नसक्ने ‘कोलाइडल सिल्भर फिल्टर’ विकास गरिएको छ । यस फिल्टरमा साधारण माटोको क्याण्डलको सट्टा चाँदीलेपन गरिएको माटोको क्याण्डल वा प्लेट डिस्क प्रयोग गरिन्छ ।
यस फिल्टरको प्रमुख विशेषता भनेको क्याण्डल वा प्लेटमा लेपन गरिएको चाँदीले पानीमा भएका कीटाणुलाई नष्ट गर्नु हो । यस प्रविधिको विकास सन् १९८१ मा ICAITI (Central American Institute for Industrial Research and Technology) भन्ने औद्योगिक अनुसन्धान प्रतिष्ठानले ग्वाटेमालामा गरेको थियो ।
निकारागुवा स्थित पोटर्स फर पिस (Potters for Peace) नामक संस्थाले सन् १९९८ देखि यसको व्यापक प्रचारप्रसार गर्दै आइरहेको छ । हाल मध्य अमेरिका, अफ्रिका तथा एसियाका विभिन्न ठाउँमा यस फिल्टरको प्रयोग भइरहेको छ ।
नेपालमा सन् २००२ देखि २००४ सम्म IDE (International Development Enterprises – Nepal) नामक संस्थाले स्थानीय गाउँघरहरुमा यसको प्रभावकारिता सम्बन्धमा नमूना परियोजना सञ्चालन गरेको थियो ।
हाल ‘सफा फिल्टर’ को नाममा यस फिल्टरको उत्पादन र बिक्रि वितरण हुँदै आएको छ । यसको साथै SBL (Solutions Benefiting Life) नामक संस्थाले पनि यस्तो फिल्टरको प्रवर्धन गर्दै आएको छ ।
कोलाइडल सिल्भरले कसरी जीवाणु हटाउँछ ?
कोलाइडल सिल्भरले सूक्ष्म जीवाणुहरुको कोषमा हुने रासायनिक प्रक्रिया दरलाई परिवर्तन गरी अक्सिजन प्रयोग गर्ने क्षमतामा ह्रास ल्याउँछ । यसले गर्दा यी जीवहरु अक्सिजनको अभावमा निस्सासिएर मर्छन् ।
तर कोलाइडल सिल्भर मानवका लागि विषाक्त ९त्यहष्अ० हुँदैन र यसले नकारात्मक असर नपर्ने गरी पानीमा भएका सूक्ष्म जीवाणुहरु (जस्तै : ब्याक्टेरिया, भाइरस आदि) नष्ट गर्दछ ।
कोलाइडल सिल्भर फिल्टरका फाइदाहरु :
– रोगजन्य कीटाणुहरु (ब्याक्टेरिया भाइरस) नष्ट गर्दछ ।
– यसले प्रति घण्टा दुई लिटर पानी छान्दछ । पछिल्लो समय प्रति घण्टा ४ लिटर पानी छान्ने क्याण्डल पनि बजारमा आइसकेका छन् ।
– प्रयोग गर्न सजिलो छ ।
– एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सार्न सकिन्छ ।
फिल्टर जडान र प्रयोग :
– फिल्टर राम्रोसँग सफा गर्ने । तर क्याण्लमा साबुन पानी पर्न दिनु हुँदैन ।
– फिल्टर जडान गरी माथिल्लो भाँडोमा पानी भर्ने ।
– फिल्टर जडान गरेको पहिलो र दोस्रो पटकमा छानिएर आएको पानी प्रयोग नगरी फाल्ने ।
– त्यसपछि फिल्टरमा नयाँ पानी हाली पिउनको लागि प्रयोग गर्ने ।
– माटोको क्याण्डल र भाँडो फुट्ने डर हुन्छ ।
– क्याण्डल सबै ठाउँमा उपलब्ध नहुन सक्छ ।
– फिल्टरलाई सूर्यको प्रकाश सिधै नपर्ने समथल स्थानमा राख्नु पर्दछ ।
– बेला बेलामा फिल्टरको क्याण्डल वा प्लेट डिस्क नरम ब्रस वा जाली वा सफा नरम कपडाबाट राम्रोसँग सफा गर्नु पर्दछ ।
– फिल्टर सफा गर्दा साबुनको प्रयोग कहिल्यै गर्नु हुँदैन ।
– सफा गर्दा अन्त्यमा फिल्टर गरिसकेको पानीले फिल्टरको भित्र–बाहिर सफा गर्नु पर्दछ ।
– फिल्टरको क्याण्डललाई पानीमा कहिल्यै उमाल्नु हुँदैन ।
– फिल्टरको धाराको पानी आउने प्वालमा फोहोर हातले छुनु हुँदैन ।
– फिल्टर गर्नुपर्ने पानी धेरै नैं धमिलो भए पहिला सफा कपडाले छान्ने वा थिग्राउने र त्यसपछि मात्र फिल्टरमा राख्ने गर्नु पर्दछ ।